5 Superstars WWE amin'izao fotoana izao izay saika tsy takatra tsy misy volombava - Wwe
5 Superstars WWE amin'izao fotoana izao izay saika tsy takatra tsy misy volombava
Superstar maro amin'ny lisitra WWE ankehitriny fanatanjahan-tena volombava endrika na farafaharatsiny karazana volo tarehy. Ny volombava dia afaka manova tanteraka ny fisehoan'ny olona iray ary toy izany koa ho an'ny sasany amin'ireo superstar malalantsika.
Vao tsy ela akory izay, ny kintana SmackDown Otis dia nanaratra ny volombavany lava sy niseho tamin'ny marika Blue niaraka tamin'ny tarehy voaharatra. Gaga ny WWE Universe nahita an'io kinanjo azy io, ary maro aza no nilaza fa toa tsy takatry ny saina izy. Miaraka amin'izany ao an-tsaina, mahaliana ny mahita ny endrik'ireo WWE Superstars hafa tsy misy volombava.
Fomba fijery vaovao. Fihetsika vaovao. @otiswwe dia eto #WWETheBump . pic.twitter.com/7zW5CoMnsq
- WWE's The Bump (@WWETheBump) 30 Jona 2021
Andao hojerentsika ireo Superstars WWE dimy ankehitriny izay toa tsy takatry ny saina tsy misy volombava. Aza hadino ny manome hevitra avy eo ary ampahafantaro anay ny fihetsikao mitovy amin'izany. Iza araka ny eritreritrao no manana volombava tsara indrindra amin'ny WWE amin'izao fotoana izao?
# 5 Sheamus (WWE RAW)
Tompondaka eran'izao tontolo izao in-efatra ao amin'ny WWE, Sheamus no iray amin'ireo kintana ambony indrindra tamin'ny fampiroboroboana efa folo taona mahery izao. Malaza eo amin'ireo mpankafy azy noho ny fombany mafy sy ny lalao mahery setra nataony, izy dia iray amin'ireo kintana WWE vitsivitsy izay somary misy volombava foana.
Na izany aza, ity sary etsy ambony ity dia mampiseho an'i Sheamus miaraka amina endrika tsy voaharatra voadio miaraka amin'ny WWE Superstar Xavier Woods. Ny Celtic Warrior dia toa tsy fantatra tanteraka raha tsy misy volombava.
Sheamus dia manao fampisehoana amin'ny Alatsinainy alina RAW ary Tompondakan'i Etazonia. Nahazo ny anaram-boninahitra izy tamin'ny fandreseny an'i Riddle tao amin'ny WrestleMania 37 tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Vao tsy ela akory izay dia naratra mafy izy nandritra ny lalao tamin'ny RAW tamin'i Humberto Carrillo. Nandalo fandidiana izy ary nanomboka naminavina ireo mpankafy raha hanafoana ny titre any Etazonia izy.
.. miala tsiny TSY MIASA. #USChampion pic.twitter.com/JiCoB6nJd0
- Sheamus (@WWESheamus) 1 Jona 2021
Na izany aza, satria lehilahy mahery izy, Sheamus dia nilaza mazava fa tsy mikasa ny hiala ny anaram-boninahitra izy ary hiverina hiasa tsy ho ela. Ho hita eo izay drafitra ananan'i WWE ho azy ao amin'ny WWE SummerSlam amin'ny faran'ity taona ity.
Ahoana no ho fantatra raha nandeha tsara ny daty
ny fomba hiresahana ilay fifandraisana aminy
zava-misy mahafinaritra momba ny tenanao amin'ny asa
ahoana no ahalalako raha manintona aho
azo atao ve ny tsara loatra